Egwu abughi atumatu | Martech Zone
Wenezde, August 30, 2006 Wenezde, August 30, 2006 Douglas Karr
Egwu abughi atumatu. Na 1929, Walter Cannon kọwara ọgụ-ma-ọ bụ ụgbọ elu dị ka nzaghachi nye nnukwu nrụgide. Egwu nwere ike inwe otu mmetụta ahụ na ụlọ ọrụ. Otu ụlọ ọrụ nwere ike ịlụ ọgụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ịgba ọsọ. Lụ ọgụ na-eme ka o sie ike, ụgbọ elu na-egbochi ọganihu ya. Ozugbo ụlọ ọrụ gbanwere n'ọdụ ala n'ihi egwu, ọ na-esi ike ịlaghachi azụ na nkasi obi na ọsọ ha nwere na mbụ. Companylọ ọrụ gị ga-alụ ọgụ.
Jọ: mmetụta uche na-enye nsogbu kpalitere site na ihe egwu, ihe ọjọọ, ihe mgbu, wdg, ma egwu ahụ ọ dị adị ma ọ bụ n'echiche; mmetụta ma ọ bụ ọnọdụ nke ịtụ ụjọ. - Dabere na Dictionary.com
Jọ n'ụlọ ọrụ bụkarị chere kama ịbụ eziokwu. Egwu maka asọmpi, egwu ọdịda, egwu ịda mba, ụjọ ịchụpụ ndị ọrụ, ụjọ ịkwụ ụgwọ uru, wdg. Ndị ọrụ nwere ike ịtụ ụjọ na a ga-achụ ha n'ọrụ, na-atụ ụjọ na a gaghị ebuli ha n'ọkwá, ma ọ bụ na-atụ ụjọ na ha agaghị enweta ụgwọ a na-akwụ ha. Ọ bụrụ na ị kwe ka ụjọ gbochie nka na ọrụ azụmaahịa, ụlọ ọrụ na-anaghị atụ ụjọ ga- gafere gị. Ọ bụ mgbe ahụ ka egwu gị ga-eme n’ezie.
Ọ bụrụ n ’ụjọ na ụlọ ọrụ gị, ọ na-adọta gị. Ọ bụrụ na ị nwere ndị ọrụ ụjọ na-atụ ụjọ, ha anaghị atụ ụjọ ma na-agabiga nsogbu ndị ha na-eche ihu. Kpochapu egwu site na imuta ihe site na ọdịda kari inye ntaramahụhụ, site na inye ihe egwu na oganihu, site na igbusi egwu na isi mmalite. A ga-ewepụ ndị ọrụ na-agbasa ụjọ. Ha bụ ihe mgbochi na-egbochi ọganihu ụlọ ọrụ gị. Jọ bụ ọrịa na-agbasa ngwa ngwa. Mee ọsọ ọsọ skwọsh ya.
Kwụsị ụjọ na ụlọ ọrụ gị ga-agbanye asọmpi ahụ, ndị ọrụ gị ga-enwe obi ike ma mee ihe ziri ezi, ndị ahịa gị ga-ahụ gị n'anya maka ya.